ဒေါ်လာဈေးကစားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ လေးဦးကို ဖမ်းဆီးထား၊ တစ်ဦး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေ၍ ဝရမ်းပြေးအြ? - Yangon Media Group
ဒေါ်လာဈေးကစားမှုကြောင့် အမှု ဖွင့်ထားသူငါးဦးအနက် လေးဦး အားဖမ်းဆီးရမိထားပြီး ဒေါ်လာ ဈေးကစားသူများတွင် ရွှေလုပ် ငန်းရှင်တစ်ဦးပါဝင်ကြောင်း၊ တစ် ဦးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေသ ဖြင့် ဝရမ်းပြေးအဖြစ် ထပ်တိုး အမှုဖွင့်ထားကြောင်း အထူးစုံစမ်း စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (စသုံးလုံး) မှ သိရသည်။
၄င်းတို့ငါးဦးကို၂၀၁၂ခုနှစ် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ ပုဒ်မ၄၂/ ၄၃ဖြင့်ကျောက်တံတား၊ ပန်းဘဲတန်းနှင့် ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ်တို့ရှိ ရဲစခန်းများတွင် အမှု ဖွင့်အရေးယူထားပြီး ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်နေသူတစ်ဦးကို တရားခံပြေးအဖြစ် ထပ်မံအမှု ဖွင့်ထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း အထူး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (စ သုံးလုံး)မှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးက ပြောသည်။
“ဒေါ်လာနဲ့ဆိုင်တာကို အမှု ဖွင့်တာဖြစ်ပါတယ်။ ခေါ်ယူစစ် ဆေးတာ ၁၀ ယောက်ကျော် တယ်။ အဲဒီထဲက ငါးဦးကို အမှု ဖွင့်အရေးယူထားတာမှာ လေးဦး ကတော့ ပုဇွန်တောင်၊ ကျောက် တံတားနဲ့ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်မှာ ရှိတဲ့ ရဲစခန်းတွေမှာရှိတယ်။ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့တစ်ယောက်ကို တရား ခံပြေးနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်။ စစ်ဆေးခံခဲ့ရတဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ သတိပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ ထပ်မံစစ်ဆေးမှုတွေ ဆက်လုပ် မယ်။ ဘယ်နှဦးလဲဆိုတာတော့ အတိအကျပြောလို့မရဘူး””ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်လာနှင့် ရွှေလေပတ်ကား အရောင်းအဝယ်လက်ကြီးသမား အချို့ကို စက်တင်ဘာ၂၄ ရက်က စတင်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပြီးနောက် ငါးဦးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မ ၄၂/၄၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့ပြီး ကျန်ခြောက်ဦးကျော်ကို ပြန်လွှတ်ပေး လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စသုံးလုံးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မျိုးက ပြောသည်။ အမှုဖွင့်အရေးယူခံထားရသူ ငါးဦးအနက်တစ်ဦးမှာ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင် အသင်း၏အမှုဆောင်တစ်ဦးပါဝင် ကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်အသင်းမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိတ်စိန်ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးဇော်အောင်က”ရွှေဈေးကွက်အသိုင်းအဝိုင်းထဲက လေးငါးယောက်လောက်တော့ခေါ်ယူ စစ်ဆေးခံရတယ်လို့ သိရတယ်။ ဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သူတို့ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အရ ပြောပြဖို့အဆင်မပြေဘူး။ အချို့တော့ပြန်လာကြပြီ လို့တော့သိရတယ်။ စစချင်းရွှေဈေးကွက်မဖွင့်ဘူး။ ခုတော့ ရွှေဈေးပြန် ဖွင့်တာ သုံးရက်လောက်တော့ရှိပြီ။ ဒေါ်လာဈေးလည်းကျလာသလို ရွှေဈေးလည်းကျပ် ၁၀ သိန်းအောက်ကိုတော့ကျလာတယ်” ဟု ၄င်းက ပြောသည်။
ဒေါ်လာဈေးကစားသူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ်အရေးယူရန် အ စိုးရကဆောင်ရွက်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက်၊ နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာ၂၄ ရက်မှစတင်ကာ ဒေါ်လာနှင့်ရွှေ လေပတ်ကားလက် ကြီးသမားအချို့ကိုခေါ်ယူကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးသန်းမြင့်က “ဒီလိုလူတွေက ဘယ်သူသေသေ ငတေမာရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ လုပ်နေကြပုံပေါ်တယ်ဗျာ။ ထိထိရောက်ရောက်အရေးယူပေးစေချင် ပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ဈေးကွက်တစ်ခုလုံးကမောက် ကမဖြစ်၊ ဒေါ်လာဈေးတွေ၊ ရွှေဈေးတွေမတရားတက်၊ အဲဒီသက်ရောက် မှုက ကုန်ဈေးနှုန်းတွေတက် ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ကုန်ရောလေ။ ဆန္ဒပြတာတွေ၊ အရေးအခင်းတွေတောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလူ တွေကို ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကို ပျက်စီးအောင်လုပ်မှုနဲ့ကို အရေးယူသင့်ပါတယ်”ဟု သုံးသပ်ပြောသည်။
မြန်မာ့ငွေတန်ဖိုး၂၅ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ကျဆင်းနေ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၏ အသံကိုနားထောင်ပြီး အချိ?
ရာထူးမှ နုတ်ထွက်သွားသော အမေရိကန် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၏ နေရာတွင် ဒုဝန်ကြီးကို သမ္မတထရန့် အစားထိ??
FDA မှ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်တွင် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဈေးကွက်နမူနာ ၂၈ဝ၇ မျိုး စစ်ဆေးခဲ့ရာ စားသုံ?